स्वास्थ्यमा व्यापक हेरफेर, निमित्त महानिर्देशकमा श्रेष्ठ - Health Today Nepal
February 21st, 2020 समाचार0comments
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनापछि भानुभक्त ढकालले मन्त्रालय मातहतका एक दर्जनभन्दा बढी अड्डाहरूको प्रमुखको हेरफेर गरेका छन् । अधिकांश सरुवा तथा नियुक्तिमा कार्य सम्पादन र क्षमतालाई भन्दा राजनीतिक आस्था, पहुँच र नातागत सम्बन्धले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका तीन विभागहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशकमा सम्भवतः पहिलोपटक गैरचिकित्सकलाई नियुक्त गरिएको छ । विभागको निमित्त महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । महानिर्देशकका लागि स्वास्थ्य सेवाको १२औँ तहमा कार्यरत प्रमुख विशेषज्ञ हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपछि श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालय गत भदौमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलको सेवानिवृत्तिपछि प्रमुख विशेषज्ञविहीन छ । यसअघिका निमित्त महानिर्देशक डा. रोशन पोखरेल मन्त्रालयमा तानिएका छन् । मन्त्रालयले नीति तथा योजना महाशाखाको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ । महाशाखाको जिम्मेवारी डा. गुणराज लोहनीलाई दिइएको छ । उनी केही समयअघि मात्र कोसी अस्पतालबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए । उनलाई १० महिनापहिले निमित्त महानिर्देशकबाट कोसी अञ्चल अस्पताल सरुवा गरिएको थियो ।
यसअघि योजना महाशाखा सम्हालिरहेका डा. विकास देवकोटालाई स्वास्थ्य समन्वय महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । समन्वयमा यसअगाडि महेन्द्र श्रेष्ठ थिए ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको जिम्मेवारी डा. वासुदेव पाण्डेले पाएका छन् । यसअघि उनी टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । यसअघि महाशाखाको नेतृत्व डा. विवेकलाल कर्णले सम्हाल्दै आएका थिए ।
मन्त्रालयले पाँच वटा केन्द्रको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको निर्देशकमा डा. विवेकलाल कर्णलाई पठाइएको छ । यसअघि उनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा थिए ।
हालै सरकारले ठूला पाँच अस्पतालको नेतृत्वसमेत हेरफेर गरेको छ । कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशकमा डा. कृष्ण पौडेल नियुक्त भएका छन् । यसअघिका निर्देशक डा. आरपी बिच्छालाई कान्तिमै राखिएको छ ।
टेकु अस्पतालको निर्देशकमा यसअघि क्षयरोग केन्द्रमा रहेका डा. सागर भण्डारीलाई ल्याइएको छ । त्यसैगरी, भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा डा. प्रकाश थापा र कोसी अस्पतालमा डा. चुम्बनलाल दासलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । डा. रविन खड्का वीर अस्पतालको उपनिर्देशकमा नियुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा डा. सन्तोष पौडेल नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री ढकालले कार्यरत निर्देशकको पदावधि आधाभन्दा बढी समय बाँकी नै हुँदा नयाँ निर्देशक नियुक्त गरेका हुन् ।
डा. पौडेल सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट चिकित्सकहरूको संगठन राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा यसअघि चिकित्सकमध्येबाटै महानिर्देशक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले गरेको यो प्रयोग अव्यावहारिक मात्र नभई गैरकानुनीसमेत भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
Previous article पत्रु खानाले बालबालिकामा मोटोपना
Next article ट्रम्पले लागू गरेको ‘ग्याग रुल’ले विकासोन्मुख देशको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रभावित